Wiktionary:Fitsipika - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Eto amin'ny Wikibolana, ny votoatiny dia ilaina dikaina amin'ny teny malagasy. Noho ny maha-rakibolana an'i Wikibolana dia tsy maintsy manazava ny teny no tanjon'ny votoatiny apetraka eto.
р== Fitsipika mikasika ny pejy ==
Ny toerana ametrahana votoatiny tena votoatiny dia ao amin'ny anaran-tsehatra fotony (NS:0) voalohany indrindra. Ny lazaina fa votoatiny eto dia ireo pejy manome ny etimolojia, ny famaritana ary ny fanononana. Ireo lisi-teny indray anefa tsy manana ny toerany ao amin'ny NS:0 : eo amin'ny anaran-tsehatra Rakibolana no hametrahana ireo lisi-teny ireo.
Ny zava-drehetra mikasika ny tetikasa (toa ny pejy fandraisana, ny pejim-pikambanana), dia atao ao amin'ny anaran-tsehatra Wiktionary.
Ireo pejy izay mikasika ny fanapahan-kevitry ny fikambanana dia azo apetraka na eo amin'ny Dinika, na eo amina pejin-tetikasa iray manokana. Mba hahafantarana ny filàna ilay pejy moramora kokoa, dia sokajiana araka ny lohaheviny ilay pejy, dia asiana rohy mankany amin'ilay pejy eo amin'ny Dinika hahafahan'ny rehetra mitsidika azy moramora kokoa. û
1 Fepetra mikasika ny ireo teny azo atsofoka eto na tsia
1.1 Fepetra mikasika ny fanatsofohana teny
1.1.1 Teny fototra
1.1.3 Teny avy amin'ny fototeny nasiana tovona na tovana
2 Fepetra mikasika ny fampisondrotana ny zom-pikambana
3 Fepetra mikasika ny fanapahan-kevitra
3.1 Taha ilaina farafahakeliny
3.2 Fepetra mikasika ny fitazomana na famafàm-pejy
4 Fepetra mikasika ny fahafahana mandatsa-bato
5 Fanakanana kaontim-pikambana na adiresy IP
5.1 Halavan'ny sakana
Fepetra mikasika ny ireo teny azo atsofoka eto na tsiaHanova
I Wikibolana dia tetiasa manan-tanjona ny manazava ary mandika ny teny rehetra amin'ny fiteny rehetra.
Fepetra mikasika ny fanatsofohana tenyHanova
Ny teny izay ifotoran'ny atao hoe endri-teny dia tokony ahitana teny famaritana. Azo tsy asiana teny famaritana izy ireo raha misy fampahalalana hafa ao anatin'ilay votoatim-pejy: karazan-teny, dikan-teny, sns.
Ireo teny fototra izay ampidirina eto amin'i Wikibolana dia tsy maintsy efa nampiasaina eo amin'ny aterineto na anaty boky. Ho an'ireo teny izay kely loharanon-tsoratra eo amin'ny Tranonkala (toa ny teny malagasy), dia ekena ny fampiasana azy indray mandeha anaty lahatsoratra hita na aiza na aiza ; na dia izany aza tsy ekena ny fampidirana teny SMS na hadisoan-tsipelina. Ireo fomba fanoratana hafa ny teny iray dia azo atsofoka eto, fa ho pejy fihodinana (redirection) ilay izy, raha tsy be mpampiasa (tranga latsaky ny 8 eo amin'i Google).
Ho an'ireo teny izay be loharanon-tsoratra eo amin'ny Tranonkala (toa ny teny anglisy na ny teny frantsay), dia tsy ekena ny fampiasana azy raha latsaky ny roa eo amin'ny aterineto na eo anaty boky. Tahaka ny teny tsy be loharanon-tsoratra, tsy ekena ny fanatsofohana SMS (afatsy ireo be mpampiasa toa lol, mdr...). Ho an'ireo fiteny ireo indray dia tsy hekena ny hadisoan-tsipelina, na dia fihodinana aza.
Raha voaforona eto ny pejy mikasika ny ny teny ifotoran'ny endri-teny dia ekena avokoa tsy asiam-pepetra ny endri-teny miaraka aminy. Ireo endri-teny izay lazain'ny boky grameran'ilay fiteny fa azo atao amin'ny fomba ara-teôrika dia azo atsofoka eto amin'i Wikibolana, na dia tsy misy valim-pikaroana aza eo amin'i Google, na rindrankajy fikarohana ny tranonkala hafa. Araka izany, dia ekena ny teny asorotaniko, asorotaninao, asorotaniny... eto amin'i Wikibolana na dia tsy nahitana na inona na inona aza eo amin'i Google eo.
Teny avy amin'ny fototeny nasiana tovona na tovanaHanova
Iharan'ity fitsipika ity koa ireo teny vaovao voaforona araka ny tovana ary ny tovona azo ampiarahana aminy. Na dia izany aza, ilaina hita ary porofoina ny fampiasana ireo teny ireo, noho izy ireo voasokajy ho teny fototra (azo ahitana endrika).
Ireo anarantsamirery dia azo atsofoka eto amin'i Wikibolana ary sokajiana ho anaran-tsamirery. Ny tsy azo atao fotsiny dia mampiditra ny anarana manontolon'ny olona iray. Ohatra azo atsofoka eto ny teny Ravalomanana, fa anefa tsy ho ekena eto ny teny Marc Ravalomanana noho izy io anaran'olona.
Azo apetraka eto ihany koa ny anaran-toerana ary ireo anaram-biby amin'ny teny malagasy (ny voalohany dia ho voasokajy ho anaran-tsamirery ary ny faharoa dia ho voasokajy ho anarana iombonana) (ny anaram-biby araka ny fifanarahana iraisam-pirenena dia ho voasokajy anaty sokajy manokana).
Fepetra mikasika ny fampisondrotana ny zom-pikambanaHanova
Ireo mpikambana izay mangataka zo manokana (mpandrindra, borôkraty, rôbô ho an'ny kaonty iray ananany) eto amin'ity Wiki ity dia tokony mametraka ny fangatahany ao amin'ny dinika. Ireo mpikambana mavitrika eo amin'ny fikambanana dia afaka mametraka ny fanohanany na ny fitoherany ho an'ilay fanomezana zo manokana. Raha latsaky ny telo no isa manontolon'ny mpanome hevitra ary raha iray no nanohitra dia tsy hanan-kery ilay hataka. Raha maherin'izany kosa dia tsy maintsy manohana ny 66%-n'ny naneho hevitra.
Azon'ny mpikambana ny mangataka fampisondrotana zom-pikambana. Fa mba tsy ho voalà ny fahazoana ireo zo ireo, dia tsara indrindra ny manana ny fatokisan'ny mpikambana hafa.
Ilaina fantarina ihany koa fa tsy homena maimaimpoana ny zo manokana. Raha tia ho mpandrindra ianao, dia ilainao ny manatanteraka ny hataky ny fikambanana mikasika ny asa manokana izay tsy afaka ataon'ny mpikambana tsotra : famafana pejy, fampidirana pejy avy amin'ny wiki hafa...
Misy ireo zo izay tsy azo ananana raha tsy voaporofo ny tenanao (amin'ny alalan'ny fandefasana kara-panondro na pasipaoro any amin'ny Wikimedia Foundation). Ireo zo manokana ireo dia hahazoana fampahalalana manokana mikasika ny mpikambana, na hahazoana zo manerana ny tetikasa Wikimedia. Raha efa nankasitraka ny fahazoanao ireo zo ireo fikambanana, dia mila alefa any amin'ny foiben'ny Wikimedia Foundation ny fotokopian'ny taratasinao, izay mety maharitra herinandro maromaro.
Fepetra mikasika ny fanapahan-kevitraHanova
Ny fanapahan-kevitra eto amin'i Wikibolana izay tsy mikasika ny famafana haingana na tsy mikasika ny tsifanajana zom-pamorona dia ataon'ny mpikambana mavitrika ary miteny ny tenim-botoatiny (malagasy).
Ny fotoana ikatonan'ny fandatsaham-bato dia 10 andro (240 ora) aorian'ny andro nanokafana azy raha tsy mihoatra ny roa ny isan'ny soso-kevitra hotapahan-kevitra. Raha maherin'ny 2 ny isan'ny sosokevitra dia ho 15 andro (360 ora) aorian'ny daty nisokafany ny daty anidiana ilay fanapahan-kevitra.
Taha ilaina farafahakelinyHanova
Mitovy amin'ny fanomezana zo manokana ho an'ny mpikambana iray. Na dia izany aza, mba hahamora ny fampidirana fitsipika ary mba hampivoatra haingana ny fandrosoan'ny tetikasa, dia natao ho samihafa :
75% ny taha fanohanana ilaina fararahakeliny raha sosokevi-pitsipika iray raha voalohany indrindra izy io no kasaina. 66% raha fanindroany ary 50% raha fanintelony na mihoatra.
66% ny taha fanohanana ilaina fararahakeliny raha mikasika ny fanomezana zo manokana ho an'ny mpikambana iray.
Raha tsy takatra anatin'ny 10 na 15 andro (araka ny tranga voafaritra tetsy ambony) ny taha ilaina farafahakeliny dia tsy misy ilay fifanarahana. Rehefa tsy misy fifanarahana dia azo ahemotra 5 andro ny daty fampiharana ilay fanapahan-kevitra. Raha mbola tsy takatra tanatin'ny 5 andro ny taha farafahakeliny, dia tsy tapaka ilay hevitra.
Fepetra mikasika ny fitazomana na famafàm-pejyHanova
66% ny taha fanohanana ilaina fararahakeliny raha mikasika ny famafana pejy iray. Izany hoe raha 66% no manohana ny famafana, dia hovoafafa ilay pejy, raha 66% no manohana ny fitazomana ilay pejy, dia hovoatazona ilay pejy. Raha tsy izany dia tsy mitsahatra ilay latsa-bato raha tsy tratra ny 66%. Raha 50% ny tahan'ireo mpanohana sy ny tahan'ireo mpanohitra, ary raha efa 100 no isa tontalin'ireo mpanohana sy ireo mpanohitra, dia ny fanapahan-kevitry ny mpikambana faha-101 no hanan-kery mikasika ny fitazomana na mikasika ny famafàm-pejy, mba tsy hampaharitra ny fanapahan-kevitra.
Hihatra afaka 24 ora (farafahakeliny) aorian'ny latsa-bato manapa-kevitra ny famafàna. Raha miova ny fanapahan-kevitra anatin'izay fe-potoana izay dia ahemotra 24 ora ny fanidiana ny fanapahan-kevitra. Tapitra izay 24 ora izay dia hidiana ny fanapahan-kevitra (arovana ny pejy fikasana) ary hofafàna (na hotazonina) eo no eo ny pejy, araky ny hevitra navoaka ary ny latsa-baton'ny mpikambana.
Fepetra mikasika ny fahafahana mandatsa-batoHanova
Ireto ny fepetra mikasika ny fahafahana mandatsa-bato. Raha tsy feno ireo fepetra ireo tsy azon'ilay mpikambana ny mandatsa-bato :
Nanokatra ny kaontiny 5 andro alohan'ny natombohan'ilay fanapahan-kevitra na fifidianana
Manana fanovana lehibe mahery ny 75, ary nanova in-dimy farafahakeliny nandritry ny volana farany.
Fanakanana kaontim-pikambana na adiresy IPHanova
Ny fanakanana mpikambana dia mikasika ireo mpikambana tsy manaja ny fitsipika na maneho tsifahalalam-pomba na tsifanajàna ny lalàna (ny lalàn'ny firenena ipetrahany ary/na ny lalàn'i Etazonia izay toerana misy ny lohamilin'i Wikimedia).
Tsy atao maimaimpoana ny fanakanana kaontim-pikambana mandrakizay. Tsy azo atao ny manakana IP mandrakizay, na manakana azy mihoatry ny iray volana.
Ny mpikamba nisoratra anarana ihany no azo sakanana mandrakizay. Ny antony azo anakanana mpikambana mandrakizay dia ny fandotoana (fanisiana rohy mankany amina tranonkala na spam) na fanimbana pejy (famafana votoatiny tsy misy antony). Azo ampiharina tokoa ny sakana mandrakizay rehefa fandotoana sy/na fanimbana ihany no antony nandraisan'ilay mpikambana anjara.
Rehefa tsy misy fanapahan-kevitra nataon'ny fikambanana dia ny mpandrindra no misafidy samirery ny halavan'ny sakana. Rehefa izany dia eto ambany ny halava farafahabetsaky ny sakana:
Antony mety mihatra (tsy voafetra amin'ny ohatra eo ambany)
1 ora hatramin'ny 1 andro (24 ora) Fanandramana na fanimbana pejy tsy misy antony manokana; fanisiana votoatiny amin'ny teny tsy tenin'ny votoatiny.
1 andro hatramin'ny 1 volana (30 andro) Fametrahana fampahalalana diso, fametrahana teny ratsy na fanompana mpikambana;
1 volana hatramin'ny 1 taona (365 andro) Fanakorontanana ny firindran'ny fikambanana.
1 taona hatramin'ny 10 taona Fanararaotana maharitra, Fanakorontanana ny firindran'ny fikambanana.
Mandrakizay (>10 taona) Kaonty noforonina hanimbasimbana, hanararaotra na hanakorontana ny fikambanana
↑ 1,0 et 1,1 Ny fikambanana eto dia ny mpikambana mavitrika izay naneho ny heviny mikasika ny soso-kevitra iray
↑ Fanovana izay ahitana fahasamihafana mahery ny 100 karakitera farafahakeliny ary izay tsy voamarika ho fanovana kely
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Wiktionary:Fitsipika&oldid=25518778"
Dernière modification le 23 Jiona 2018, à 06:05
Voaova farany tamin'ny 23 Jiona 2018 amin'ny 06:05 ity pejy ity.